Ukukhutshwa kwePlum okumangalisayo kweNtetho yeMaker ye-iOS -Yenza, Qhelisela, Yiva, Ugcine kwaye unike iintetho eziMangalisayo ngoku | Plum emangalisayo
UKUHLAZIYA NGOJUNI 17, 2014
Iplum emangalisayo ikhupha i-SpeechMaker ye-iOS-
Yila, Qhelisela, uve, UkuVimba kunye nokunika okumangalisayo
IPrinceville, eHawaii-nge-17 kaJuni ka-2014-iPlamu emangalisayo namhlanje ibhengeze ukukhutshwa kweNtethoMaker, inguqulelo entsha ye-iPhone kunye ne-iPad teleprompter yabo kunye nepakheji yokudala intetho.
Yenza, Ziqhelise, Yiva, Gcina indawo yogcino kwaye unike iiNtetho- Isikhulumi-magama sesoftware yokwenza i-iPhone yakho okanye i-iPad ibe yindawo eqingqiweyo yeselfowuni, incwadi yokubhalela, uvimba wentetho kunye nomnxibelelanisi wefowuni othetha esidlangalaleni. * Udunyiswa yi-CNN *
UJulian Miller uyile i-SpeechMaker yokunceda abantu abafana naye abanengxaki yokuthetha namaqela amakhulu. Umnumzana Miller uthe, "NgeSpeechMaker nabani na angaguqula i-iPad / i-iPhone ibe yi-1000 ye-teleprompter yokuthetha esidlangalaleni." Uqhubeke wathi, “I-SpeechMaker ifana neqonga eliphathwayo elinezinto zonke zokunceda nawuphi na umfundi, umhlohli, imbongi okanye igcisa lomculo we-rap ukunika intsebenzo yoluntu ngokubanzi. Okubaluleke ngakumbi kukuba inceda izithethi ukuba zifunde ukujonga phezulu kwaye zinxibelelane ngokweemvakalelo nabaphulaphuli bazo. ”
Nika intetho yakho okanye uhambise imigca yakho ngaphandle kwamathandabuzo kunye nangexesha. Gcina onke amanqaku akho, iintetho, zidlala kwindawo enye. Usebenzisa uSiri chaza loo ntetho okanye umbongo xa uziva. Gcina umkhondo uze uhambise iintetho, imibongo, izinkulumo, imidlalo, iintshumayelo kunye nokuhlekisa. I-SpeMM ibonelela ngesiseko sakhe nabani na ofuna ukufunda okanye sele ethetha esidlangalaleni.
Abantu basebenzisa i-SpeechMaker kugcino, ukuhlela nokufunda imibongo, iingoma, izikripthi, umdlalo ohlekisayo, izifundo, iintshumayelo kunye nemidlalo. Utitshala uDavid Brock uthi, "Wonke umfundi kufuneka abe nale app kwi-iPad yakhe".
I-SpeMM ithandwa kakhulu ngabafundi, abafundisi, iimbongi, abezopolitiko, abalawuli, iipodcasters, abafundisi, abaphathiswa, ababhali, iingoma zokudlala, ababhali bezithethi, ababhali beencwadi, ababalisi beqonga, oomaqhuzu, iimvumi kunye nabadlali. I-SpeMM inika zonke iintlobo zee-orators yonke into efunekayo ukudala, ukuziqhelanisa, ukuva kunye nokunika iintetho.
Ziqhelanise nokurekhoda umculo ukuze uve ukuba uva njani na ngaphambi kokuthetha. Fumana imvakalelo yokuqaqamba kunye nokuhamba kwentetho, imibongo, intetho, umdlalo, iingoma, njl njl.
I-SpeechMaker iza nenani leentetho ezidumileyo ezakhelwe ngaphakathi kwaye inokugcina ezinye iintetho ezinolwazi olunje ngesihloko, umbhali, umhla kunye nokurekhodwa kweaudiyo.
-Thenga kube kanye ukuqhuba kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad.
-I-UI entle kunye nemizobo ethe tyaba ye-iOS 7
-Ukungenisa isicatshulwa, i-rtf, kunye ne-pdf ngeDropBox, iGoogle Drayivu, kunye nokukopa kunye nokuncamathisela kunye nokwabelana ngefayile iTunes
-Khuphela ngaphandle isicatshulwa sentetho nge-imeyile
-Ngenisa kwaye uthumele ngaphandle iaudiyo ngeDropbox
Ukurekhodwa komsindo kukuvumela ukuba ufumane ingxelo njengoko uqhelisela intetho yakho
-Njenge-teleprompter autoscroll intetho yakho ngesantya esifanelekileyo
-Yiva i-iPad / i-iPhone ithethe ngokuvakalayo intetho njengoko iskrola kwaye iphakamisa umgca ngamnye
- Khetha kolunye lweelwimi ezingama-36 ezahlukeneyo kunye namazwi eSiri
- Ngokuflipha iqhosha ubone izenzi, izibizo, izichazi kunye nezinye iindawo zentetho eziqaqanjiswe ngemibala eyahlukeneyo
-Lawula ukujonga uxwebhu ngokutshintsha, umbala ongasemva, iifonti, isantya sokuhamba, ubungakanani befonti
- Amaqhosha kunye nezimbo zomzimba ukuqala, ukumisa kunye nokulawula isantya sokushukuma
+ ukucinezela okanye ukusondeza ukutshintsha ubungakanani befonti
+ bamba kwaye uhambise kwangoko kuyo nayiphi na indawo yentetho
-Ukujonga ixesha lokuthetha, kudlulile, kusele, kunye nexesha elililo
-Bonisa i-iPhone yakho okanye i-iPad kwi-Mac enkulu usebenzisa i-X-Mirage
-Bonisa kwi-AppleTV edityanisiweyo ye-HD yezitishi zeTV, izitudiyo, iiholo, iipodcasters, iiholo zokufundisa kunye nemidlalo.
I-SpeMMer inamandla ngakumbi kwaye iphathekayo emva koko iifowuni zixabisa i-1000 yeedola kwaye yenza okungaphezulu koko.
Intsha kule nguqulo
- utshintsho olukhulu.
- ngoku isebenza kwi-iPhone kunye ne-iPad
-Usebenzisa ii-apile isicatshulwa samva kwintetho yawo onke amazwi kunye neelwimi ezingama-36.
Ulawulo olungakumbi lwendlela yokuthetha.
-Ihlaziyelwe kwimizobo emihle ye-ios7 kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad.
-Udityaniswe nekhowudi ye-x yamva nje.
- ukulungiswa ezininzi.
-UGoogle kunye nodibaniso lwebhokisi yedropho, ukungenisa / ukuthumela ngaphandle kuhlaziyiwe.
- ngoku ixhasa ubume bendawo kunye nokuma kwemizobo.
- incwadana ihlaziyiwe.
- enkosi kubo bonke abasebenzisi. Nceda ugcine iingcebiso zisiza.
I-SpeechMaker iphawulwe ukusuka kwi- $ 14.99 ukuya kwixabiso elikhethekileyo kakhulu le- $ 0.99 kwiveki e-1 kude kube nguJuni 22.
Abasebenzisi bangaphambili beNtetho yeMaker banokuphucula isimahla.
Iilayisensi zokuphononongwa eziyi-100 ziyafumaneka kumalungu eendaba. Ukuba unomdla wokujonga kwakhona i-SpeechMaker nceda uqhagamshelane noJulian Miller (julian@plumamazing.com). I-Apple isinika kuphela i-100 ngoko ke sicela ubuze kungekudala kunye neziqinisekiso zakho zeendaba.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano julian@plumamazing.com ukuba unemibuzo okanye ufuna udliwanondlebe lwe-podcast.
Ulwazi oluninzi malunga neNtethaMaker
I-Plum emangalisayo igxila ekwenzeni imveliso kunye nesoftware enefoto ye-OS X, i-iOS, iWindows kunye neWindows. Phakathi kweemveliso zabo ezidumileyo zezi Kopa uncamathisele, iKey, iClock, iWatermark, I-PixelStick kwaye IfotoMatte.